Izindatshana zikaCarson Conant ku Martech Zone |
Imibhalo nge UCarson Conant
UCarson Conant uyi-CEO noMsunguli womhlinzeki wesixazululo sokuthengisa esisebenza ngokuthengisa eseChicago IMediafly. Njengoba ekhulele emndenini osomabhizinisi, uCarson akazazi izinselelo nemivuzo yokwakha inkampani kusuka phansi nokuhlanganisa iqembu eliqhakazile elizokwenza ngempumelelo ngombono walo. Ngaphansi kobuholi bukaCarson, iMediafly ibhekwe njengeNkampani Ekhula Ngokushesha ka-Inc. Iminyaka emihlanu ilandelana, enye yezindawo ezihamba phambili ze-Inc. zika-5000, kanye neNdawo Engcono Kakhulu Yokusebenza yiCrain's Chicago Business. Isoftware kaMediafly okwamanje isetshenzisiwe yizinkampani eziphezulu zeFortune 2018 ezibandakanya iPepsiCo, iMillerCoors, iDisney, neGoldman Sachs.